Ereyga Hada - - Mark Marklet -
Muusikada & Dhacdooyinka
Khariidad Jannada ah
MARKA LAGU BILAABO
IIMAAN IYO AKHLAAQ
GALMADA AADANAHA & XORRIYADDA
SALAADDA SOO NOQOSHADA
Todobo sano oo tijaabo ah
WEBCAST & MUUQAALO
HALKII SAMADU TABTAY
MAXAY Katoolik u tahay?
Natiijooyin intaa ka badan ...
Haddii aad ka mid tahay macaamiisheeda The Now Word, hubi in iimaylada lagugu soo diro ay yihiin kuwa "ku qoran liiska cad" ee adeeg bixiyahaaga internetka adiga oo u oggolaanaya iimaylka "markmallett.com". Sidoo kale, hubi galka junk ama spamka haddii iimaylada ay halkaas ku dhammaanayaan oo hubso inaad u calaamadiso "aan ahayn" junk ama spam.
HALKAN waa wax dhacaya oo ay tahay in aan fiiro gaar ah u yeelano, wax uu Rabbi samaynayo, ama mid la odhan karo, oo oggolaanayo. Taasina waa ka xayuubintii Caruuskiisa, Kaniisadda Hooyada, dharkeeda adduunyo iyo wasakhaysan, ilaa ay hortiisa istaagto iyadoo qaawan.Continue reading →
Jawaab ku socota Jimmy Akin - Qaybta 2
JAWAABAHA KATOOLIGA Raali-geliyaha cowboy-ga, Jimmy Akin, waxa uu sii wadaa in uu buro hoostiisa mareegaha walaasheen, Tirinta Boqortooyada. Waa tan jawaabtayda toogashadii ugu dambeysay…Continue reading →
Aragti Raalli ah oo aan raali laga ahayn
... ma jiro mid ka indha la' kii aan doonayn inuu wax arko mooyaane.
iyo in kastoo calamadaha waayaha la sii sheegay.
xataa kuwa iimaanka leh
diido inaad eegto waxa dhacaya.
-Marwadeena Gisella Cardia, Oktoobar 26th, 2021
ANIGA loo malaynayo in ay ka xishoon ciwaanka maqaalkan - ka xishoon in ay ku dhawaaqdo weedha "waqtiga dhamaadka" ama xigashada kitaabka Muujintii aad u yar ku dhiiran in la xuso muuqaalada Marian. Waxyaabaha qadiimiga ah ee noocan oo kale ah ayaa loo malaynayaa inay ku jiraan qashinka boodhka ee khuraafaadka dhexe ee dhexe oo ay weheliso caqiidada qadiimiga ah ee "waxyiga gaarka ah", "wax sii sheegidda" iyo tibaaxaha ceebta ah ee "calaamada bahalka" ama "ka geesta ah." Haa, way ka fiican tahay in laga tago wakhtigaas garish markii kaniisadaha Katooliga ay ku soo qulquleen foox sida ay u soo baxeen quduusiinta, wadaaddadu waxay wacdiyeen jaahilka, iyo dadka caadiga ah waxay rumaysnaayeen in rumaysadku uu ka saari karo belaayada iyo jinniyada. Waagaas, taallo iyo sawirro kaniisado lagu qurxiyay oo keliya maaha, laakiin dhismayaasha dadweynaha iyo guryaha. Bal qiyaas taas. The "Dark Ages" - cawaan la iftiimay iyaga ugu yeedha.Continue reading →
CIISE wuxuu dhashay habeenkii. Ku dhashay xilli ay xiisaddu hawada buuxisay. Ku dhashay waqti aad u badan keenna. Sidee bay tani rajo noogu buuxin kartaa?Continue reading →
Masskii Hore U Socda
…Kaniis kasta oo gaar ah waa in ay waafaqsan tahay Kaniisadda caalamiga ah
ma aha oo kaliya ku saabsan caqiidada iimaanka iyo calaamadaha karaamada,
laakiin sidoo kale sida isticmaalka caalamiga ah ee laga helo dhaqanka rasuulnimada iyo kuwa aan jabin.
Kuwan waa in aan la ilaalin oo kaliya si khaladaadka looga fogaado.
laakiin waa in rumaysadka lagu gacangeliyo daacadnimadiisa.
tan iyo xeerkii kaniisadda ee salaadda (lex orandi) u dhiganta
si ay u xukunto iimaankeeda (aqoonsiga lex).
-Tilmaanta Guud ee Missal Roman, daabacaadda 3aad, 2002, 397
IT Waxaa laga yaabaa inay u ekaato wax la yaab leh inaan wax ka qorayo xiisadda ka taagan Mass Laatiinka. Sababta ayaa ah inaan weligay ka qayb gelin salaadda Tridentine ee noloshayda.Waxaan ka qayb galay arooska Tridentine, laakiin wadaadku wuxuu u ekaa inaanu garanayn waxa uu samaynayo oo dhammaan liturgigu way kala firirsan yihiin oo waa khayaali. Laakiin taasi waa sababta dhabta ah ee aan u ahay goobjooge dhexdhexaad ah oo aan rajaynayo wax waxtar leh in lagu daro wadahadalka…Continue reading →
Waxaan ka qayb galay arooska Tridentine, laakiin wadaadku wuxuu u ekaa inaanu garanayn waxa uu samaynayo oo dhammaan liturgigu way kala firirsan yihiin oo waa khayaali.
Ilaalinta dadkaaga Quduuska ah ee aan waxba galabsan
Renaissance Fresco oo muujinaysa Xasuuqa aan waxba galabsan
Collegiata ee San Gimignano, Italy
WAX Waxa si weyn u khaldamay markii ikhtiraacii tignoolajiyada, oo hadda dunida oo dhan lagu qaybiyo, uu ku baaqayo in si degdeg ah loo joojiyo. Shabakadda mareegaha ee miyir-qabka ah, Mark Mallett iyo Christine Watkins waxay wadaagaan sababta ay dhakhaatiirta iyo saynisyahannadu uga digayaan, iyagoo ka duulaya xogta iyo daraasadaha cusub, in dhallaanka iyo carruurta lagu duro daaweynta hidde-sidaha tijaabada ah ay uga tagi karto cudurro daran sannadaha soo socda… mid ka mid ah digniinihii ugu muhiimsanaa ee aanu bixinay sanadkan. Waxa barbar socda weerarkii Herodos uu ku qaaday dadka aan waxba galabsan ee quduuska ah inta lagu guda jiro xilliga kirismaska ​​​​waa wax aan la garan karin. Continue reading →
Jawaab ku socota Jimmy Akin
CATHOLIC Raali-geliyaha Jimmy Akin waxa uu qalinka ku duugay maqaal uu su’aal kaga keenayo hufnaanta mareegta walaashay, Countdown to the Kingdom.Continue reading →
Siidaynta Novel Cusub! Dhiiga
QOR version ee taxanaha Dhiiga hadda waa la heli karaa!
Tan iyo markii la sii daayay sheeko-abuurkii ugu horreeyay ee gabadheyda Denise Geedka wax ka badan todoba sano ka hor - buug soo ururiyay dib u eegis qaali ah iyo dadaalka ay dadka qaar u galeen in laga dhigo filim - waxaan sugaynay taxanaha. Oo ugu dambeyntii waa halkan. Dhiiga waxa uu sheekada ku sii wadaa qaab khuraafaad ah isaga oo Denise eraygiisa cajiibka ah ku dharbaaxay si uu u qaabeeyo jilayaasha dhabta ah, u farsameeyo sawiro cajiib ah, ugana dhigo sheekadu in badan ka dib markaad buuga dhigto. Mawduucyo badan oo ku jira Dhiiga si qoto dheer ula hadal waqtiyadeena. Ma aan aad ugu faani karin aabaheed… oo aan ugu faraxsanahay akhriste ahaan. Laakiin ha u qaadan ereygayga: akhri faallooyinka hoose!Continue reading →
WAM - Ruush Roulette
AS dawladaha adduunka oo dhan waxay bilaabaan inay xoojiyaan irbado qasab ah iyagoo u hanjabaya "aan la tallaalin", kuwaas oo si sax ah u ciyaaraya Roulette Ruush nolosha dadka kale, wax ka yar iyaga? Continue reading →
Faadumo, iyo Ruxashada Weyn
KHATAR Waqti ka hor, sidaan uga fikiray sababta qorraxdu ugu muuqato inay cirka u jeedayso Faadumo, aragtida ayaa ii timid oo aan ahayn aragti qorraxdu u socoto per se, laakiin dhulka. Taasi waa markii aan ka fikiray xiriirka ka dhexeeya "gariir weyn" ee dhulka oo ay sii sheegeen nebiyo badan oo la aamini karo, iyo "mucjisada qorraxda." Si kastaba ha noqotee, markii ugu dambeysay ee la sii daayay xusuusta Sr. Lucia, aragti cusub oo ku saabsan Sirta Saddexaad ee Fatima ayaa lagu muujiyay qoraalladeeda. Ilaa waqtigan, wixii aan ka ogaanay ciqaabta dhulka oo dib loo dhigay (taasi waxay na siisay "waqtigan naxariista") waxaa lagu sharaxay bogga Vatican-ka:Continue reading →
Khariidad Jannada ah (5)
MARKA LAGU BILAABO (5)
IIMAAN IYO AKHLAAQ (179)
GALMADA AADANAHA & XORRIYADDA (7)
MASS AKHRISO (311)
BARASHADA CABSIGA (37)
SALAADDA SOO NOQOSHADA (44)
Todobo sano oo tijaabo ah (11)
RABAANKA ILAAHAY (22)
WAQTIGII NABADDA (76)
HUBKA QOYSKA (14)
SHANTA DANTA (7)
TIJAABOOYINKA WAYN (250)
XAQIIQA ADAG (44)
JAHLIGA CUSUB (10)
WAKHTIGII Nicmada (122)
Dhawaqa digniinta! (10)
SUG DAQIIQAD (3)
HALKII SAMADU TABTAY (7)
MAXAY Katoolik u tahay? (9)
Archives Select Month Janaayo 2022 (3) Diisambar 2021 (7) Nofeembar 2021 (7) Oktoobar 2021 (6) Sebtember 2021 (5) Heemaal Staff Ogosto 2021, 5 Luulyo 2021 (3) Juun 2021 (2) Laga yaabaa 2021 (6) Abriil 2021 (6) Maarso 2021 (9) Febraayo 2021 (10) Janaayo 2021 (9) Diisambar 2020 (9) Nofeembar 2020 (8) Oktoobar 2020 (15) Sebtember 2020 (6) Heemaal Staff Ogosto 2020, 6 Luulyo 2020 (11) Juun 2020 (13) Laga yaabaa 2020 (9) Abriil 2020 (11) Maarso 2020 (12) Febraayo 2020 (7) Janaayo 2020 (10) Diisambar 2019 (7) Nofeembar 2019 (11) Oktoobar 2019 (7) Sebtember 2019 (6) Heemaal Staff Ogosto 2019, 1 Luulyo 2019 (4) Juun 2019 (6) Laga yaabaa 2019 (9) Abriil 2019 (15) Maarso 2019 (5) Febraayo 2019 (9) Janaayo 2019 (7) Diisambar 2018 (3) Nofeembar 2018 (10) Oktoobar 2018 (8) Sebtember 2018 (5) Heemaal Staff Ogosto 2018, 4 Luulyo 2018 (3) Juun 2018 (6) Laga yaabaa 2018 (13) Abriil 2018 (11) Maarso 2018 (8) Febraayo 2018 (13) Janaayo 2018 (11) Diisambar 2017 (10) Nofeembar 2017 (10) Oktoobar 2017 (11) Sebtember 2017 (9) Heemaal Staff Ogosto 2017, 11 Luulyo 2017 (9) Juun 2017 (9) Laga yaabaa 2017 (10) Abriil 2017 (8) Maarso 2017 (9) Febraayo 2017 (8) Janaayo 2017 (9) Diisambar 2016 (14) Nofeembar 2016 (13) Oktoobar 2016 (6) Sebtember 2016 (15) Heemaal Staff Ogosto 2016, 7 Luulyo 2016 (6) Juun 2016 (9) Laga yaabaa 2016 (10) Abriil 2016 (7) Maarso 2016 (25) Febraayo 2016 (21) Janaayo 2016 (8) Diisambar 2015 (7) Nofeembar 2015 (9) Oktoobar 2015 (11) Sebtember 2015 (9) Heemaal Staff Ogosto 2015, 5 Luulyo 2015 (8) Juun 2015 (8) Laga yaabaa 2015 (9) Abriil 2015 (9) Maarso 2015 (27) Febraayo 2015 (17) Janaayo 2015 (11) Diisambar 2014 (10) Nofeembar 2014 (7) Oktoobar 2014 (21) Sebtember 2014 (21) Heemaal Staff Ogosto 2014, 6 Luulyo 2014 (6) Juun 2014 (5) Laga yaabaa 2014 (19) Abriil 2014 (22) Maarso 2014 (26) Febraayo 2014 (24) Janaayo 2014 (27) Diisambar 2013 (24) Nofeembar 2013 (6) Oktoobar 2013 (5) Sebtember 2013 (3) Heemaal Staff Ogosto 2013, 2 Luulyo 2013 (4) Juun 2013 (1) Laga yaabaa 2013 (6) Abriil 2013 (7) Maarso 2013 (11) Febraayo 2013 (10) Janaayo 2013 (3) Diisambar 2012 (2) Nofeembar 2012 (3) Oktoobar 2012 (3) Sebtember 2012 (5) Heemaal Staff Ogosto 2012, 1 Luulyo 2012 (3) Juun 2012 (5) Laga yaabaa 2012 (2) Abriil 2012 (5) Maarso 2012 (5) Febraayo 2012 (7) Janaayo 2012 (6) Diisambar 2011 (8) Nofeembar 2011 (6) Oktoobar 2011 (7) Sebtember 2011 (3) Heemaal Staff Ogosto 2011, 5 Luulyo 2011 (4) Juun 2011 (9) Laga yaabaa 2011 (4) Abriil 2011 (1) Maarso 2011 (4) Febraayo 2011 (3) Janaayo 2011 (7) Diisambar 2010 (7) Nofeembar 2010 (5) Oktoobar 2010 (5) Sebtember 2010 (5) Heemaal Staff Ogosto 2010, 3 Luulyo 2010 (5) Juun 2010 (7) Laga yaabaa 2010 (9) Abriil 2010 (14) Maarso 2010 (8) Febraayo 2010 (9) Janaayo 2010 (5) Diisambar 2009 (8) Nofeembar 2009 (6) Oktoobar 2009 (5) Sebtember 2009 (4) Heemaal Staff Ogosto 2009, 4 Luulyo 2009 (7) Juun 2009 (7) Laga yaabaa 2009 (5) Abriil 2009 (8) Maarso 2009 (2) Febraayo 2009 (8) Janaayo 2009 (13) Diisambar 2008 (10) Nofeembar 2008 (9) Oktoobar 2008 (11) Sebtember 2008 (10) Heemaal Staff Ogosto 2008, 7 Luulyo 2008 (2) Juun 2008 (5) Laga yaabaa 2008 (7) Abriil 2008 (8) Maarso 2008 (10) Febraayo 2008 (7) Janaayo 2008 (5) Diisambar 2007 (12) Nofeembar 2007 (9) Oktoobar 2007 (5) Sebtember 2007 (10) Heemaal Staff Ogosto 2007, 8 Luulyo 2007 (5) Juun 2007 (5) Laga yaabaa 2007 (6) Abriil 2007 (7) Maarso 2007 (4) Febraayo 2007 (6) Janaayo 2007 (10) Diisambar 2006 (9) Nofeembar 2006 (10) Oktoobar 2006 (10) Sebtember 2006 (24) Heemaal Staff Ogosto 2006, 19 Luulyo 2006 (16) Juun 2006 (21) Laga yaabaa 2006 (17) Abriil 2006 (19) Maarso 2006 (22) Febraayo 2006 (16) Janaayo 2006 (16) Diisambar 2005 (10) Nofeembar 2005 (1) Juun 2005 (1) Abriil 2003 (1) Maarso 2003 (1)
Waxaad si guul leh ugu biirtay liiska macaamiisheena.
Naqshadeynta websaydhka © 2022 tiDesign